Pío na pinto, ilay soavaly mitafy palitao hita maso. Soavaly Noti
Ilay soavaly piebald na pinto dia miaraka a palitao hita maso, lehibe matetika, izay mahatonga azy tsy hifangaro amin'ny Appaloosa.
Toy ny tamin'ny lahatsoratra teo aloha toa ny an'ny soavaly chestnut na ny thrushes, rehefa miresaka soavaly mpivavaka na pto isika, karazana volom-borona no tianay holazaina tsy hazakazaka ny equines. Na dia marina aza izany, dia mora kokoa indraindray ny manasokajy azy ireo amin'ny volony noho ny amin'ny karazany.
Te hahafantatra bebe kokoa momba an'io volony io ve ianao?
Ny anaran'io palitao Equine io dia miteraka fikorontanana. ¿Pinto? Cheep? Loko?
Pinto sy Pío dia anarana roa mitovy karazana palitao voaloto. Ny iray na ny iray hafa dia ampiasaina arakaraka ny faritra jeografika.
Na dia marina aza izany amin'ny faritra sasany amin'ny jeografia dia manavaka ny sasany eo anelanelan'ny pío sy pinto:
Any amin'ny toerana sasany dia miantso izy ireo pint amin'ny soavaly izay manana ny teboka miloko mainty sy fotsyraha cheep ho an'izay manana azy fotsy sy volontany.
Any amin'ny faritra hafa no iantsoana azy cheep mankamin'io equine io no misy ny maizina ny loko sy ny fotony ary eo no ielezana ny toerana fotsy. Etsy ankilany, pintos dia ireo izay ny teboka miloko mainty dia nalahatra teo amin'ny fotony fotsy.
Na izany na tsy izany dia miresaka a karazana palitao mitovy izay antsoina amin'ny fomba samihafa.
Zava-dehibe izany aza afangaro ny palitao amin'ny karazana American Paint Horse. Ity karazana ity dia manana palitao pinto fa tsy ny Pinto rehetra dia an'ny karazany Paint Horse.
Misy iray karazany maro karazana izay afaka manolotra an'ity palitao ity, toy ny: Gypsy Vanner, Quarter Horse, Hunter Horse, Tennesse Walking, American Saddlebred, Kathiawari, Marwari, Criollo, Curly Horse Azteca, Islandy, Missouri Fox Trotter, Mustang na ilay antsoina hoe Paint Horse.
1 Manao ahoana ny labiera na pinta?
1.1 Karazana sosona
2 Ny toetran'ny pinto na piebald dia mitovy
2.1 Maso manga
2.2 Marika «Satroka fanafody»
2.3 Syndrome mahafaty fotsy
3 Kely aminao tantara
Manao ahoana ny labiera na pinta?
Ireo capes amin'ny soavaly piebald na pinto dia matetika Loko roa, iray foana ny fotsy sy ny tonony hafa mety ho ny an'ny misy ny sosona Equine: mainty, chestnut, bay, hoditra, sorrel, roan, thrush, perla, palomino, sns.
Ny loko fotsy dia maniry eo amin'ny hoditra mavokely sy mihena.
Ny endrik'ireo teboka misy ny feony roa dia samy hafa be amin'ny iray equine ka hatramin'ny iray hafa. Amin'izay mba palitao pius tsirairay dia misy teboka miavaka.
Ny palitao mainty mazàna dia miovaova amin'ny volony satria ny biby dia lasa hatramin'ny alikaola ka hatramin'ny soavaly lehibe Na izany aza, ny endrik'ireo toerana ireo dia matetika tsy miova afa-tsy ny maningana toy ny amin'ny soavaly mitafy volondavenona. Ireo faritra volondavenona amin'ny palitao dia manjary manjavozavo amin'ny sosona fotsy rehefa antitra ny soavaly. Amin'ireny tranga ireny, rehefa antitra be ilay biby dia mety ho diso izy raha soavaly volondavenona.
Mahaliana ny fahalalana an'izany ny sosona voaloko mazàna dia manjaka amin'ny sosona matanjaka rehetra ary noho izany raha pinto ny iray amin'ireo ray aman-dreny, dia azo inoana fa toy izany koa ny zanany. Raha misy a ray pinto madio ny taranany dia ho Pto, fa raha toa ka tsy pinto madio izy io fa taranaky ny sosona matevina sy ny pinta, dia azo inoana fa ilay fototarazo nolovan'ny foals anao no ilay mivaingana.
Araka ny efa nampoizinay fa ny maodelin'ireo teboka dia miavaka amin'ny endriny tsirairay amin'ity karazana volom-borona ity, na izany aza azo sokajiana ho isan-karazany arakaraka ny génétique isaky ny santionany pio na pinto.
Ankoatr'izay, ny fampifangaroana karazana isan-karazany dia mety hitranga amin'ny soavaly iray ihany, toy ny bulldogs.
Andao hojerentsika ny karazana sosona azon'izy ireo atakambana:
Amin'ity karazana volom-borona pinto ity, fotsy toerana tsy hiampita ny indray ny soavaly eo anelanelan'ny malazo sy ny rambony, na dia eo aza ny faningana sasany dia mety misy pentina any amin'io faritra io nefa zara aza.
Matetika izy ireo dia manana efatra tongotra maizina kokoa noho ny sisa, y amin'ny tranga izay tsy manana ny efatra dia manana iray farafaharatsiny izy ireo. Ny maningana dia ireo rajako sabino izay manana tongotra fotsy telo na efatra sy teboka juniper. Eo amin'ny tarehy no misy azy ireo matetika tarehy fotsy, tsy misy endrika na frontin.
ny sosona ao amin'ny vatana dia tsy ara-dalàna ary matetika manjavozavo eo anelanelan'izy ireo fa tsy mamorona tsipika maranitra.
Ao anatin'ny akanjo ivelany dia ahitantsika karazana isan-karazany:
Overo saino: Mety hiseho moto izy io, eo amin'ny sisiny eo anelanelan'ny sosona roa misy loko samy hafa. Io no lamina mahazatra indrindra amin'ny akanjo palitao. Manana marika amin'ny tarehy izy ireo ary tongotra fotsy telo na efatra.
Palitao marika: Manana tasy fotsy eo amin'ny kibony izy ireo. Ao amin'ny faritry ny valahana, manomboka amin'ny malazo ka hatramin'ny rambony sy ny mony, saika ny ankamaroan'ny santionany misy marika be loatra dia maneho loko matevina izy ireo.
Palitao nanarona: Io no karazana akanjo ivelany hafahafa indrindra. Ny tsipika fizarana an'ireo palitao roa dia mazava be. Manana volony fotsy manarona ny tratra, soroka, ny tapany ambany amin'ny tendany ary ny kibony ankoatry ny tongotra fotsy efatra. Izany hoe, ny tapany ambany amin'ny biby dia fotsy. Matetika izy ireo dia manana maso manga. Ny anomaly an'ny fitoviana dia ity: maro no teraka marenina. Io koa no palitao mahazatra indrindra amin'ny karazan-tsoavaly Abaco Colonial Horse.
Ity ny sosona loko izay mety hiteraka fikorontanana be indrindra rehefa hamantatra azy io nanomboka teo ny palitao fotsy mazàna dia mandrakotra ireo faritra izay ahafahan'ny soavaly palitao mafy misy pentina fotsy. Ny maha samy hafa azy dia ireo teboka miloko lava kokoa ary tsy ara-dalàna ny endriny.
Marina fa raha fantatrao tsara fa miady amin'ny soavaly pinto isika dia tsara kokoa ny manana vaovao momba ny palitaon'ireo ray aman-dreniny.
Soavaly roa miaraka amin'ny karazana palitao mafy dia afaka manana ny karazan'ireo karazana palitao hafa, rehefa teraka miaraka amina karazana palitao hafa ny zanak'izy ireo dia antsoina hoe Cropout.
Es ny sosona mahazatra indrindra eo amin'ny palitao pinto. Matetika dia misy ny tongotra fotsy efatra farafaharatsiny manomboka amin'ny lohalika midina ary amin'ny volombava. ny ny maizina mazàna dia mandrakotra ny sisiny iray na roa ary ny teboka lehibe sy mahazatra manana endrika izy ireo Boribory somary lavalava na boribory mivelatra eo ambanin'ny hatoka, tratra ary soroka. Ny tarehy dia mazàna amin'ny sosona maizina na farafaharatsiny farafaharatsiny.
Ao amin'ny vatana ny lokon'ny iray amin'ireo sosona na ny fotsy na ny maizina no manjakazaka, fa ny mifangaro ny mana sy ny rambony. Matetika soritra ireo teboka.
Ity sosona ity no valin'ny fiampitana soavaly be loatra miaraka amin'ny tobiano. Ohatra tsara ny vokatr'io fiampitana io Tobiano miaraka amin'ny tarehy be loatra.
Ity palitao ity dia mety hiteraka fikorontanana kely raha ampitahaina amin'ireo karazana palitao hafa. Satria, ohatra, ny akoho sasany misy volo fotsy be amin'ny tongony ary ny mony dia mety ho gorse. Na dia izany aza, na dia mety hitovy aza izy ireo, dia tsy mitovy izany.
Ny toetran'ny pinto na piebald dia mitovy
Omena ara-dalàna izy ireo amin'ny soavaly pinto izay fotsy ny ankamaroan'ny tarehiny na manana endrika ry zareo. Ny faritry ny hodi-maso dia mety tafiditra ao na tsia, na dia amina tranga maro aza dia ampidirina ao.
Marika «Satroka fanafody»
Na dia zavatra mety hitranga amin'ny sosona hafa aza izy io, ny tena fahita dia ao anaty paingotra izany. Izany dia ahitana ny faritry ny maizina ny sofina sy ny nape raha fotsy ny manodidina (tarehy sy tendany). Manome ny endrika isehoany fa manao satroka ilay biby. Matetika misy be ao soavaly mustang. Ny Amerikanina tera-tany dia nanome azy ireo hery manasitrana, ka izany no anarana ahafantarana an'io marika io.
Syndrome mahafaty fotsy
Tsy ny zava-drehetra dia mifanaraka tsara amin'ny palitao. Misy a gen misy amin'ny karazana palitao overo izany dia miteraka io aretina io na dia tsy ny be loatra aza no mitondra azy ary nisy ny tranga izay nataon'ny olona sasany tsy tafahoatra. aretina misy fiantraikany amin'ny foal teraka homozygous génétique. Io fototarazo io dia nampitain'ny iray amin'ireo ray aman-dreny nitondra azy tamin'ny ADN-ny nefa tsy voakasik'izany. Ilay zanak'ampondra maty fotoana fohy taorian'ny nahaterahany noho ny tsy fetezana tao amin'ny tsinaibe.
Ho fanampin'izany, ny alikaola dia misy albinisma, ka izany no anaran'ny an'io aretina io. Ity génie ity dia ampandehanana an-tsokosoko eo amin'ireo soavaly mitondra azy. Soa ihany azo tsapain-tanana amin'ny fitsapana ADN izy io mba hisorohana ny fiterahana.
Ny olona dia liana tamin'ireny palitao mitovy totohondry tsy dia fahita na hafahafa ireny ary nitombo tamin'ny soavaly tompony tamina fikasana hitahiry azy ireo.
Efa misy sary hoso-doko vita amin'ny zavatra vita amin'ny seramika na any Egypte taloha ary na dia ao amin'ny sary hoso-doko azo jerena ny biby manana morphologie mitovy totofana miaraka amin'ny palitao misy pentina.
Fotoana iray manan-danja amin'ny fitoviana akanjo misy pentina dia ny taonjato faha-XNUMX-XNUMX. ny Ireo mpanafika espaniola dia nitondra an'ireto soavaly volom-borona nahaliana ireto tany amin'ny tontolo vaovao, izay hamotsorana ny sasany noho ny antony maro samihafa. Ireo dia lasa maroons, noforonina na nanatevin-daharana ny omby ary niely nanerana an'i Amerika. Rehefa ela dia hiteraka ny karazana soavaly American Paint na mandoko amerikana aho.
Androany izao indrindra en Amerika izay misy isan'ny santionany ny sosona pint misy izy ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Pío na pinto, ilay soavaly mitafy palitao